+२ को नयाँ नियम, छोटा स्कर्ट र बाइक बन्देज, जरिवाना र सजायको नयाँ व्यवस्था !
ARCHIVE » +२ को नयाँ नियम, छोटा स्कर्ट र बाइक बन्देज, जरिवाना र सजायको नयाँ व्यवस्था !
भन्नलाई स्टुडेन्ट लाइफ इज गोल्डेन लाइफ भनिन्छ। एसईई उत्तिर्ण गरिपछि धेरै विद्यार्थीको चाहना स्वतन्त्रतामा रमाउने हुन्छ। कक्षा ११ र १२ को अध्ययन समयलाई कलेज लाइफ भन्ने गरिन्छ। तर अब विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रताका लागि सरकारले बन्देज लगाउने तयारी गरेको खबर आजको कान्तिपुर साप्ताहिकमा युवराज गौतमले लेखेका छन्।
हाल मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रचलित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले यस्तो बन्देज को व्यवस्था गर्न लागेको हो।
उक्त संशोधित ऐन र नियमावली जारी भएपछि हरेक +२ ले अनिवार्य रूपमा आचारसंहिता लागू गर्नैपर्छ।
नयाँ नियमावलीमा कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीका लागि मोबाइल र बाइकमा बन्देज लागइएको छ। त्यसबाहेक कलेज ड्रेसमा बाइक चलाउन पनि रोक लगाइएको छ। नियम पालना नगरे ५ हजार जरिवाना र जफतसम्मको व्यवस्था हुनेछ। आइपड र ल्यापटप विद्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र चलाउन पाइन्छ।
यस्तै छात्राहरूका लागि छोटा स्कर्ट लगाउनेलाई पनि कारबाही हुनेछ। स्कर्ट लगाउँदा घुँडाभन्दा कम्तिमा दुई इन्च तल हुनुपर्नेछ। यसको उल्लंघन गरे कलेजबाट निस्कासन गरिनेछ।
यस्तै विद्यालय पोसाकमा कुनै नपि सिनेमा हल, पार्क, सपिङ मल, होटल आदि स्थानमा गएको पाइए सरोकारवालाले प्रहरीलाई जिम्मा लगाइ कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै कलेज बंक गरे २ हजार रूपैयाँदेखि बोर्ड परीक्षासमेत दिन नपाउने गरी निष्कासन गरिनेछ।
चुज पाइन्ट लगाउन पाइनेछैन।
प्रकाशित : Friday, July 21, 2017
यसरी जनतालाई ढाँटेका रहेछन् अर्थमन्त्रीले, श्वेतपत्रका झुट विज्ञापन छापेर सच्याईएपछि खतिवडाको कर्तुत छताछुल्ल !
'आमालाई खुसी बनाउन आमाकै विरुद्ध मुद्दा हालें...जितें पनि !'
'७ दिनसम्म नचलेपछि सेवा फिर्ता लिन्छौं भन्दा यसरी ठगियौं... दुश्मनले पनि नजोडोस् भायनेटको सर्भिस !' [रिभ्यू-२]
ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको 'गैरकानुनी कार्यकाल'को उजुरीले खाइदियो डेपुटी गभर्नरको जागिर, शिवराज श्रेष्ठ जिम्मेवारी मुक्त !
नेपालमै पहिलोपटक देखिएको हतियार सहित २० बर्षीय पुकार शिकारी प्रहरीको फन्दामा, यस्तो छ अन्य विवरण !
तल्लोस्तरको प्रचारसँगै 'जोक अफ दी टाउन' बन्यो सनराइज बैंक ! घट्दै बैंकको इज्जत, बाध्यताले 'बेवकुफ' बन्दै मिडिया !
एचआइडीसीएललाई हाइड्रो पावर कम्पनी देख्ने सीइओ सापको 'ब्लन्डर', बढी जान्ने हुँदा ग्लोबल आइएमइकै बेइज्जत !
रोयल्टी नबुझाएको परिणाम : क्लासिकटेक र ब्रोडलिङ्कसहित चार इन्टरनेट कम्पनीको दर्ता खारेज गर्दै प्राधिकरण !
युनाइटेड फाइनान्सको बिजोग : छ्या...! सिए / एसीसीए भएर आफ्नै बेइज्जत हुनेगरी यस्तो ठाउँमा के त जागिर खानु ?
गभर्नरको कदम र अख्तियारको फलोअपले ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सीइओ पद संकटमा ! के छोड्लान् त नेपाल बंगलादेश बैंक ?